तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना ! – Sandesh Press
November 21, 2020 233
काठमाडौ । विश्वमा हामीले हरेक दिन नयाँ र फरक कुराहरु देख्न र सुन्न पाउँछौ । हामीलाई यी कुराहरु सुन्दा अच्चम लाग्ने गर्दछ । तर वास्तवमा ति कुराहरु सत्य हुन्छन् । यस्तै
एक घटना अहिले बाहिर आएको ब्राजिलको साओ पाउलोमा एक व्यक्ति तीन मिर्गौलाका साथ जिउँदो छन् । यो ब्राजिलियन मानिसमा देखीएको होे, जो अहिले सामान्य रूपमा काम गरिरहेका छन् । यो कुरा तब बाहिर आयो जब ति व्यक्तिको तल्लो पेटमा गम्भिर पीडा हुन थाल्यो ।
जानकारी अनुसार ३८ वर्षीय ति व्यक्ति डाक्टर कहाँ गएका थिए । उनलाई त्यहाँ सीटी स्क्यान गर्न सल्लाह दिइयो । स्क्यान रिपोर्टले तीन मिर्गौला भएको कुरा पुष्टि गर्यो । अनुसन्धानले स्लिप डिस्क समस्या पत्ता लगायो र उपचार
गरियो । न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार ति व्यक्ति ब्राजिलको राजधानी साओ पाउलोका हुन् । अस्पतालमा स्लिप डिस्कको उपचार पछि उनलाई डिस्चार्ज गरियो । डाक्टरहरूले बिरामीको शरीरमा कुनै मिर्गौला सम्बन्धी समस्याहरू फेला पारेनन् । यो कुरा थाहा पाए पछि डाक्टरहरू पनि छक्क परे । विश्वमा सामान्य रुपमा हेर्दा मान्छेका दुई मिर्गौला हुन्छन् ।
Prevमंसिर १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने हुदाँ यी ४ राशि हुदैछन् मालामाल !
Nextहङकङ आ’गलागीमा परेर ग’म्भीर घा’इते भएकी १८ वर्षीया सुरेखा कँडेलको पनि नि’धन
नेपालमा अब हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा निश्चित , कुन कुन बार हेर्नुहोस्